January 9, 2020 - ThutaSone
ဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင် အသက်မဲ့နွယ်ရှင် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ထူးခြား ”video ရုပ်သံ”
January 9, 2020 ThutaSone 0
ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ထူးခြား video ရုပ်သံ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်… စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ရွှေနှစ်တောရမှာ အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ video ပါ.. video ရုပ်သံ.. credit myanmar daily news unicode version ဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျနတေဲ့ ထူးခွား video ရုပျသံ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး […]
မြန်မာပြည်တွင် မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းပြီးလျှ င် တတိယအကြီးဆုံး ဖြစ်သော “သီရိသုမန ” ဘွဲ့ခံ ကြေးပိသာချိန် (၁၆ဝဝဝ) တစ်သောင်းခြောက်ထောင် အလေးချိန်ရှိ ခေါင်းလောင်းကြီးကို တမ္ပဝတီရပ်မှ ပန်းတဉ်းပညာရှင် ဦးရေ ၁၅ဝ ကျော်ဖြင့် ယနေ့ည ပြာသိုလ်လပြည့်တွင် သွန်းလုပ်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကြေးဖိုပေါင်း ၂၁ ဖိုရှိပြီး တစ်ဖိုလျှ […]
မုန်း၍လည်း ကျိန်စာမတိုက်နဲ့ ချစ်ခင်၍လည်း နောက်ဘဝပြန်တွေ့ပါရစေ ဆုမတောင်းပါနဲ့!
ဘယ်သောအခါမှ မုန်း၍လည်း ကျိန်စာမတိုက်ပါနှင့် ချစ်ခင်၍လည်း နောက်ဘဝပြန်တွေ့ပါရစေ ဆုမတောင်းကြပါနဲ့ ကံ ကံ၏အကျိုးရယ် သံသရာဆိုတာကိုရယ် ယုံကြည်သက်ဝင်ကြပါစေ။ ကံ မှန်ပါက အကျိုးပေးသန်၏ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းပါ။ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေးတွေပါ။ ပဋာစာရီ လင်ကို မြွေကိုက် သားကြီး ရေနစ် သားငယ် စွန်ချီ […]
ဒေါင်း ​ကျော်ထက်အောင် မိုးဟေကို ပိုင်ဖြိုးသုတို့နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးတော့မယ့် အေးမြဖြူ
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Winner ဆုကြီးကို မရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲက ပေးအပ်တဲ့ Winnerဆုကြီးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အေးမြဖြူလေးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်း ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အနုပညာမှာ ပါရမီပါတဲ့ သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီး မပြီးဆုံးသေးခင်ကတည်းက ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေကို ဖျော်ဖြေပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခံနေရတဲ့အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပါဝင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့”ချစ်ခင်စမှော်ရုံ”လို့ သိရှိရပါတယ်။မင်းသားချော […]
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါကံထူးလို့ ဖျာပုံသူဖျာပုံသားများ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဖူးချိန်တန်ဖူးထိုက်လို့ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်းကဘိုးဘိုးဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်းက ဖျာပုံမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအံ့တော်နှင့်ဆံတော်တစ်ဆူကိမ်းဝပ်နေတယ်လို့သိခဲ့ရပါတ​ရှေးဟောင်း သမိုင်းအစဉ်အလာအ​ရှေးကျတဲ့မြို့တွေက အမည်နှစ်လုံးတည်းနဲ့ အမည်ပေးခဲ့တဲ့ တချိန်ကမွန်ဒေသတွေပေါ့။ ပုဂံ၊ရန်ကုန်၊တွံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖျာပုံ၊ပုသိမ်၊စ​ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေ အများကြီးပေါ့အဲအထဲမှာ မွန်ဘုရင်များအဆက်ဆက်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ဖျာပုံ ဆိုတဲ့ ထမင်းဈေးမြို့ကလေးတစ်ခုလည်းပါဝင်ခဲ့တာပေါ့ ကျိုက်ပတိုင်​စေတီတော်မြတ်ကြီးကို မြန်မာ […]
မင်္ဂလာပါရှင် လက်တွေ့လေးမို့ မျှဝေပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ နှစ်ပါ။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဆေးနည်းလည်းစုံနေတာပါ။ ပြောသမျှ ပျောက်နိုး ကောင်းနိုးရာရ လိုက်သုံးတာလည်းကြာ ခုထိလည်း မသက်သာ။ အခုတော့ ညစဉ် ဆေးစည်းပြီး အိပ်တာ ၅ ရက်မှာ အတော်ကိုသိသာပြီး […]
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…. အဲတာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် […]
လေယာဉ်တွေ အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ကနေမဖြတ်ပျံဖို့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ
အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ကနေလေယာဉ်တွေမဖြတ်ပျံဖို့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအီရန်နိင်ငံအပေါ်ကဖြတ်ပျံတဲ့ယူကရိန်းခရီးသယ်တင်လေယာဉ်ပျက်ကြပြီးခရီးသည်အားလုံးအပြီး အခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းကာတာလေးကြောင်းလိုင်းနဲ့ UAE လေးကြောင်းလိုင်းတွေလဲအီရန်နိုင်ငံအပေါ်ကဖြတ်သန်းသွားရမယ့် ခရီးစဉ်တွေဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းအပြင်ဥရောပသွားမည့်တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေက အီရန်နိုင်ငံကို ပတ်ပြီးမောင်းသွားရတော့မှာပါ ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလဲအီရတ်မှာစခန်းချထားတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းကိုဖျက်အားပြင်းပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဒါဇင်လိုက်နဲ့အီရန်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုက်နေပါတယ်အီရန်ဘက်ကတော့ဒီနေ့မနက်ဖျက်အားပြင်းပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဒါဇင်လိုက်နဲ့အီရတ်ရှိအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာသူတို့ရဲ စစ်တပ်အကြီးအကဲကာဆမ်ဆူလေမာနီကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမိန့်ပေးသတ်ဖြတ်မှုအပြီးအီရန်ကတုန့်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအီရန်ရဲ့နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မူ့မှာအနည်းဆုံးတော့ အဲဘယ်နဲ့ အာအဆက်လေတပ်စခန်း ၂ခုလုံးမှာ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Ref: onlinenews XYZ NEWS Unicode အီရနျနိုငျငံအပျေါကနလေယောဉျတှမေဖွတျပြံဖို့နိုငျငံတကာလကွေောငျးအဖှဲ့ကသတငျးထုတျပွနျလိုကျဒီကနမေ့နကျအစောပိုငျးမှာအီရနျနိငျငံအပျေါကဖွတျပြံတဲ့ယူကရိနျးခရီးသယျတငျလယောဉျပကျြကွပွီးခရီးသညျအားလုံးအပွီး အခုလိုသတငျးထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ စင်ျကာပူလကွေောငျးလိုငျးကာတာလေးကွောငျးလိုငျးနဲ့ UAE လေးကွောငျးလိုငျးတှလေဲအီရနျနိုငျငံအပျေါကဖွတျသနျးသှားရမယျ့ […]
သင်တို့၏ ရှယ်တစ်ချက်က သူတို့အတွက် ထမင်းတစ်နပ်စာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ
ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ “မေတ္တာပရဟိတာဂေဟာ ” အလှူလည်းလုပ်ချင်တယ် သိပ်ဝေးဝေးလဲမသွားချင်ဘူး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမှာလည်းလှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လှည်းကူးမြို့နယ် မရမ်းချောင်းကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့​မေတ္တာပရဟိတ မသန်စွမ်းအနာကြီးရောဂါသည်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာနဲ့ မရမ်းချောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံလေးမှာလှူဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီဂေဟာလေးနဲ့ ဆေးရုံလေးက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပိုင်နယ်မြေထဲမှာရှိပေမယ့် လမ်းခရီးအရ အလှူရှင်အရောက်နည်းတာကြောင့် လိုအပ်ချက်တွေများပါတယ်။ဂေဟာမှာတော့ တနေ့တာကျေးမွေးစရိတ်နဲ့ အဖိုးအဖွားများအတွက် တခြားလိုအပ်တာလေးတွေလှူနိုင်ပါတယ် တကိုယ်ရည်သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်တာလေးတွေလှူနိုင်တဲ့အပြင် အလှူငွေအနေနဲ့လည်း ငွေတထောင်လောက်က […]